पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा फरक–फरक व्यक्ति हुनुपर्छ
फरकधारको यो शृंखलामा हामीले कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुसँग महाधिवेशनपछिको कांग्रेस कस्तो हुनुपर्छ ? र, युवा नेतृत्वको सम्भावना के छ ? भनी सोध्ने छौँ । यसै क्रममा नेपाली कांग्रेस मुगुका सभापति खड्गबहादुर शाहीलाई हामीले यो शृंखलामा प्रस्तुत गरेका छौँ । )
नेपाली कांग्रेसको वैधानिकता बचाउनका लागि पार्टीले वडा अधिवेशन सुरुवात गरिसकेको छ । तर, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार वडा अधिवेशन सम्पन्न गर्दैमा वैधानिकता टिक्छजस्तो मलाई लाग्दैन । समयमा १४औँ महाधिवेशन सम्पन्न नहुँदा वैधानिकता लगभग सकिएको महसुस भइरहेको छ ।
निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय कार्यसमितिको महाधिवेशन सम्पन्न गरेर लिस्ट पठाऊ भन्न खोजेको हो । तर, वडाको अधिवेशनले मात्र वैधानिकता टिक्छ जस्तो लाग्दैन । ढिलै भए पनि कांग्रेसले आफ्नो अधिवेशन सुरुवात गरेको छ । ७७ जिल्लामै सम्पन्न हुन नसकेको भए पनि क्रियाशीलता टुंगो लगाएका ठाउँमा अधिवेशन सर्वसम्मतरुपमै भएको हामीले पाइरहेका छौँ । मेरा जिल्लामा पनि सबै वडामा सम्पन्न भइरहेको छ ।
हिजो कम्युनिस्ट सरकारका आकाश पाताल छुने नाराहरुले जनतामा भ्रम छरेका छन् । नेपाली कांग्रेस इतिहास बोकेको पार्टी भएकाले, राष्ट्रिय र राष्ट्रियताको नारामा सधैं सकारात्मक भएको ऐतिहासिक पार्टी भएका हिसाबले पनि आगामी नेतृत्वबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला छ । निष्ठाको राजनीतिक विचार भएको जनता र पार्टीभित्र इमानदार व्यक्ति नेतृत्वमा हुनुपर्छ भन्ने माग आमकार्यकर्ता र जनताले राखिरहेका छन् ।
पछिल्लो समयमा युवाहरुको चासो र आकांक्षा देखिएको छ । सँगसँगै युवाहरुको भूमिका पनि यसमा बढी देखिएको छ । वास्तवमा कांग्रेसका युवाहरु अनुशासित छन् । नेपाली कांग्रेस सधैं अनुशासनमा बस्ने पार्टी भएका कारणले पनि यस्तो हो । हुन त स्वतन्त्र लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रका लागि लडिरहेको पार्टी हो, नेपाली कांग्रेस ।
युवाहरुको इच्छा र आकांक्षा हुँदै गर्दा पनि नेतृत्वले युवाहरुलाई दबाएको जस्तो महसुस हामीले गरिरहेका छौं । पार्टीको आचारसंहिता र नियमभित्र बसेर युवाहरुको भूमिकाको बारेमा बहस चलाउनुपर्छ । पार्टीका निम्ति पनि राष्ट्र र राष्ट्रियताका निम्ति युवाहरुको अपरिहार्य छ । सबै जिल्लाहरुको वडा प्रतिनिधिमा प्रायः युवा आइरहनुभएको छ त्यसकारण पनि यसको बहस पार्टीमा उठ्छ र उठ्नैपर्छ ।
चुनौती नै चुनौतीको बीचमा कांग्रेसको महाधिवेशन सुरुवात भइरहेको छ । अहिलेसम्म धेरै दलहरु सत्तामा पुगे । तर नेपाली जनताका लागि काम गर्न नसकेको परिस्थिति छ । नेपाली कांग्रेसमा एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ । हिजोको दिनमा तानाशाही व्यवस्था बोक्नेहरुले सत्ता सञ्चालन गरे । जनताका लागि राम्रो काम कसैले गर्न सकेनन् । एक–आपसमा कुर्सी हानाहान मात्र भएका उदाहरण धेरै छन् ।
नेपाली कांग्रेसले ऐतिहासिक जिम्मेवारी लिएका कारण भरपर्दो शासनसत्ता चलाउनका लागि हाम्रा अगाडि चुनौती आइरहेका छन् । अब आदरणीय सभापति पार्टीको सभापति मात्र नभई प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ । उहाँ पार्टीको सभापति मात्र नभई देशको अभिभावकको रुपमा जनताका जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष नजिक भएर चासो राख्नुपर्ने बेला छ ।
यो कार्यकालमा उहाँले अग्रगामी काम गर्न सक्नुभएन भने आगामी दिनमा हाम्रा यात्राहरु पनि कठिन छ । त्यसकारण पनि कांग्रेसले अग्रगामी सोच राख्नुपर्छ । जनताले अब कुनै दल वा नेताले काम गर्न सकदैनन् भन्ने परेको छ । नेपाली कांग्रेसबाहेक अरुले अब काम गर्न सक्दैनन् भन्ने पनि छ ।
अहिले जति पनि कोरोनादेखि बाढी पहिरोसम्मका अवस्था सिर्जना भएका छन् । त्यसको फेस पनि कांग्रेसले गर्न सक्नैपर्छ । मलाई के लाग्छ भने पार्टीमा देखिएको समस्या एकातिर छ । र सरकारमा देखिएको समस्या अर्कोतिर छ । पार्टी र संगठनका काम गर्नका लागि एउटा नेतृत्व स्थापित हुनुपर्छ र सरकार सञ्चालनका काम गर्नका लागि अर्को नेतृत्व हुनुपर्छ ।
सम्पूर्ण जिम्मेवारी एउटै व्यक्तिले लिँदै गर्दा पार्टी र संगठन पनि चल्न सक्दैनन्, उता सरकारका कामहरु पनि उल्लेख्य हुन सक्दैनन् । मेरो भनाइ भनेको एउटाले पार्टी र अर्कोले सत्ता सञ्चालन गर्ने गरी सहमति गरेर अघि बढ्दा सहज हुन्छ भन्ने हो ।
अबको नेपाली कांग्रेस कस्तो बन्नेछ ? भन्नेबारे पनि सबैको चासो छ । कांग्रेसलाई नेपाली जनताको भरोसा हो भन्ने गरी विकसित नेतृत्वले काम गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेको जमानामा पुरानै ढर्रा र शैलीबाट पार्टी चल्न सक्दैन ।
पार्टीलाई सुढृढ र देशलाई समृद्ध बनाउने क्षमता अबको नेतृत्वमा देखिनुपर्छ–रौतहट सभापति
प्रकाशित मिति : भदौ २३, २०७८ बुधबार १९:२७:२९, अन्तिम अपडेट : भदौ २४, २०७८ बिहीबार १३:४२:११